Iphupha ngeNtlawulo ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ivenkile yindawo apho unokuthenga iimveliso ezahlukeneyo, kodwa kunye neenkonzo. Ke le ihlala ivenkile ethengisa izinto. Kwangelo xesha, igama elithi "umthwalo" linokuchaza inxenye yefestile. Le yiflethi engashenxiswa phambi kwefestile ukuyenza mnyama okanye ukuyikhusela ekungeneni okungagunyaziswanga. Ukulayisha umpu, kwelinye icala, kuthetha ukufaka iimbumbulu kuwo nokulungiselela ukuba udubule.
Ivenkile okanye ivenkile inokubonakala njenge el mundo yamaphupha. Ukuba ufuna ukwazi ukuba ivenkile okanye ikhemesti ithetha ntoni njengeshishini ephupheni, funda njalo.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukwazi ukuba zifanekisela ntoni ezinye ivenkile, cofa apha ngokufanelekileyo: iwindow okanye umpu okanye i-ammo.
1 Uphawu lwephupha «ivenkile» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iLaden» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iLaden» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ivenkile» - ukutolikwa ngokubanzi
Ivenkile inokuchazwa ngokwahlukileyo njengophawu lwephupha. Kwelinye icala, ithathwa njengengqondo Epiphany kunye nokunikezela ukubona. Kwelinye icala, ungalwa kwaye ukuhluleka bhengeza ebomini bokuvuka. Oku kunjalo ngakumbi xa ivenkile ingenanto.
Ukuba iphupha lityelele ivenkile engenanto, kuya kufuneka ujongane nokudana kwihlabathi elivukayo. Ukuba uphuma evenkileni engenanto kwakhona, kuya kufuneka uphelise ngokukhawuleza umcimbi ongenathemba. Njengomnini wevenkile ivenkile yakhe engenanto, amaphupha aya kuvelisa amaxhala amaninzi kwixa elizayo.
Eli phupha lihle ngakumbi xa ivenkile inabathengi abaninzi. Ukuba kunjalo, impumelelo kunye nokupheliswa phu melela phakathi. Kukwanjalo nakwivenkile yamaphupha ebhengeza iimveliso ezininzi okanye ejongana neemveliso ezininzi.
Ukuba iphupha lidlula kule venkile, uya kuba nakho ukuxhathisa isilingo okanye uyakuphulukana nethuba elihle. Ukuba ingena, ezinkulu ziyafika Ukuchitha imali Ngakuye, kodwa unokuqalisa ishishini eliyimpumelelo. Ukuba ushiya ivenkile igcwele, kukho umngcipheko wokulahleka kwezinto. Kodwa ukuba ungumnini wevenkile enjalo, impumelelo iyabhengezwa.
Ukuba ivenkile evaliweyo inokubonwa kwilizwe lamaphupha, ishishini liya kuthatha indawo ngokukhawuleza. Ukuba umphuphi woyika ukuba ivenkile yakhe iyakutshisa, oku kubonisa umsebenzi omkhulu weshishini, kunye nolonwabo lwabucala.
Ukuba uthenga i-wand magic njengoHarry Potter ephupheni kwivenkile, oku kungabonisa ukuba ufuna ukufezekisa iminqweno yakho kwihlabathi elivukayo. Ivenkile enophahla oluhle olugudisiweyo inokuba ngumfanekiso ophuphayo ukulumkisa ngelahleko ukuba ayithathwa amanyathelo okhuseleko.
Uphawu lwephupha «iLaden» - ukutolikwa kwengqondo
Njengokuba ivenkile inoluhlu olwahlukeneyo lweemveliso, nobomi bunamathuba amaninzi anokubonelelwa ngabantu. Ngokwenkcazo yengqondo yamaphupha, ivenkile inokubonwa ngokubanzi njengomfanekiso wephupha xa Amathuba obomi sebenzisa okuncinci kwaye uphulukane namathuba. Oku kunokuboniswa ngokugqogqa evenkileni ephupheni.
Ukuba ivenkile yamaphupha ayinanto, oku kubonisa ukungalunganga kwephupha. Isiphumo sihlala sisilele, kuboniswe kwivenkile evaliweyo kwihlabathi lamaphupha.
Ukuba umntu ophuphayo ungena evenkileni njengomthengi, kodwa engazi nokuba ufuna ukuthenga ntoni, oku kubonisa ukungabikho kwayo. UkuzimiselaIhlala ingena kwindlela yokuvuka kobomi kwaye ikuthintele ekufezekiseni iinjongo zakho.
Uphawu lwephupha «iLaden» - ukutolika kokomoya
Kwitoliki yamaphupha ngokwasemoyeni, intente yamaphupha yalatha iyantlukwano yemibala obubomi obubonisayo xa uphupha.